Sida loo saxeexo shaashadda qufulka ee Huawei EMUI | Androidsis
Lakabka EMUI ee Huawei waqti kadib wuxuu kudaray xulashooyin badan taas ayaa ka dhigaysa mid ka duwan inta kale adoo ku sharxaya warar aad u xiiso badan. Halbeegga amniga waa mid ka mid ah kuwa ugu xoogan, laakiin wax badan ayaan qaban karnaa haddii aan nafsadeena u hurno inaan sameyno wax ka bedel yar.
Meelaheeda badan waxaa ka mid ah in ay saxeex saarto shaashadda qufulka, Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan dhigno magaceena iyo magaca awowgeen, saxiix ama erey gaar ah. Haddii ay dhacdo inaad lumiso waa wanaagsan tahay inay kugu tahay xusuus adiga oo waxaad heli kartaa oo keliya inaad furto.
Sida loo saxeexo shaashadda qufulka EMUI
EMUI iyada oo loo marayo xulashada shaashadda ayaa noo oggolaan doonta waxyaabo badanMid ka mid ah ayaa ah inaan saxiixno oo aan ku furfuro keliya milkiilaha taleefanka. Markii aad gasho, magacaaga ama saxiixaaga ayaa ka soo muuqan doona salka qalabka si ay ugu fududaato in la helo in ay adigu leedahay.
Waa astaan ​​lama huraan ah haddii aad lumiso, haddii aad rabto inaad hesho waxaad ku dhex mari kartaa aaladda Google oo xaqiijin kartaa inay adigu ku leedahay saxiixaas ama astaantaas. Ereyga furaha ahi waa lama huraan markaad xaqiijineyso inuu yahay kii aad isticmaashay iyo inaad awood u yeelatid inaad ku soo ceshato telefoonkaaga ugu muhiimsan.
Si aad saxiix ugu dhigto shaashadda qufulka ee EMUI waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Soo gal Dejinta qalabkaaga Huawei
Dhagsii xulashada "shaashadda guriga iyo gidaaradda".
Xulashada ugu dambeysa, halka ay ku qoran tahay "Saxiixa xiritaanka shaashadda", dhagsii
Hadda ku dar magacaaga hore iyo kan dambe, saxiix ama eray si aad u aqoonsato inuu yahay aaladdaada
EMUI waxay noo oggolaan doontaa inaan tan beddelno inta jeer ee aan dooneyno illaa aan ka helno midka ku habboon, kiiskeenna waxaan u isticmaalnay yaraynta Dani iyo magaca koowaad. Ka sokow, sidoo kale waa lagama maarmaan in la galo PIN-ka furitaanka shaashadda ama isticmaal faraha-faraha si aan uga dhigno mid aad u ammaan badan.
Telefoonada Huawei si buuxda ayaa loo qaabeyn karaa oo haddii aad rabto inaad hagaajiso xuduudaha, way fiicantahay inaad caymis ka bixiso taleefanka haddii ay dhacdo lumis ama lumis. EMUI sida lakabyada kale waxay la yimaadaan xulashooyin badan oo gudaha ah Waxa ay tahay inaan barto haddii aan dooneyno inaan sida ugu badan uga faa'iideysanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Sida loo saxeexo shaashadda qufulka ee Huawei EMUI